Kugadziridza WordPress Permalinks | Martech Zone
Svondo, Nyamavhuvhu 23, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Pandakatanga blog, ini ndakasarudza muyero permalink chimiro chaisanganisira zuva, mwedzi uye zuva repositi:
Sezvo bhurogu yangu payakakura mukuzivikanwa uye ini ndikadzidza zvakawanda nezve zvinongedzo zvimiro, ndakaona kuti chimiro ichi chingave nekumwe kukanganisa.
Vatsvaga vanogona kuona ipapo kana iyo blog post yaive yekare kana ichangoburwa. Ndiani anoda kuverenga zvinyorwa zvekare kana chimwe chinhu chitsva chiripo? Kana ivo vanotsvaga vakaona zuva iri mune iyo permalink chimiro, ivo vanogona kufuratira ako ekare zvinyorwa kunyangwe zvichiri zvakakosha.
Dzimwe nyanzvi dzekutsvagisa injini dzinofunga kuti imwe neimwe yekuparadzanisa ("/") inoratidza hutongi hwefodhi kuitira kuti kuwanda kwepasipo kuve kwakanyanya, kukosha kwezviri mukati mako kunofanira kuva (mamwe mapfumo anoreva kuti akavigwa zvakadzika muchimiro chedhairekitori). Kana iwe uchikwanisa kuchengeta posvo yega yega kuchikamu chimwe chete, inoronga zvirimo kusvika pamatanho maviri munzvimbo yepamusoro ... zvichireva kuti zvinogona kuve zvakakosha.
Dzimwe nyanzvi dzeSEO dzinobvumawo kuti kushandisa mazwi akakosha muzvikamu inzira huru yekutsvaga injini. Ive neshuwa yekutumidza zvikamu zvako uchishandisa anoshanda mazwi akakosha kana mitsara, zvakadaro!
Unogona here Kuchinja iyo Permalink Chimiro?
Kwenguva yakati rebei, ini kunyangwe ndakarohwa neyakagadziriswa chimiro ini pakutanga ndakamisa blog yangu pamwe… kwete iyo nyaya! Kana iwe uchida kushandura iyo permalink chimiro, Dean Lee akagadzira plugin iyo inogadzira iyo otomatiki iyo 301 redirect inodikanwa kuti ichinje kubva kune imwe nzira ye permalink kuenda kune imwe.
Iyo inonakidza yekutora pasuru ine yakasimba redirect manejimendi system iri WPEngine (Ndihwo hukama hwedu). Tine yakagadziridza mataurirwo enguva dzose kune vazhinji vedu vatengi kuitira kuti vagone kuchengetedza mamwe emagetsi avo enjini yekutsvaga pamapeji aripo akaendeswa.
Yakanaka zano, Doug. Ini ndaigara ndichifunga kuti WordPress inongobata redirects (saDrupal). Ndinofungidzira ndakanga ndakanganisa. Kutenda nekunongedzera iyi inobatsira plugin. Iye zvino ndiri kushamisika kana ndichifanira kushanyirazve yangu saiti chinongedzo chimiro
Aug 24, 2009 na2: 48 PM
Zano rakakura, senguva dzose, Doug.
Aug 24, 2009 na4: 43 PM
Kutenda nekugovana iyi info Douglas!
Aug 28, 2009 na2: 25 PM
Yakanaka info. Ndaseta izvi pablog rangu… Unotsanangudza sei chikamu chinoshandiswa mu permalink kana ukasarudza chinopfuura chikamu chimwe pachinzvimbo?
-Nekuvandudzwa kweWordPress 3.3 hazvina kukosha kuti utange permalink yako nenhamba. Ini ndinoita chinhu icho% / postname% chimiro ndiyo yakanakisa sarudzo yekuyera kunyange, sezvo iwe uchigona kufambisa zviri nyore zvinyorwa / mapeji kune akasiyana mapoka pasina kumbonetseka nezve chero nyaya.
Akachipa SSL Zvitupa
Chekutanga, rega nditende kwauri nekugovana yakakosha chinyorwa nezve bhizinesi kublogi uye chechipiri pfungwa dzako nezvezvakaipira zvekubatanidza chimiro zvinoshanda zvechokwadi. Isu tinonyatsokurudzira nechinyorwa chenyu uye ikozvino isu tinotenda zvakare kuti chimiro che permalink chinoshanda zvechokwadi kuwana vanotsvaga kufarira uye nehanya kwavo.